खाली पेटमा भूलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, यस्ता छन् कारण ! - Naya Pusta
खाली पेटमा भूलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, यस्ता छन् कारण !
Naya Pusta २०७४ चैत्र ३० गते प्रकाशित
एजेन्सी । हामी दैनिक विभिन्न समयमा विभिन्न खालका खानेकुराहरु खाइरहेका हुन्छौं । हामी बिहानै उठ्ने बित्तिकै खाजाको रुपमा धेरै प्रकारका खानेकुराहरु खाने गर्छौं । हामीले बिहानै खाने कतिपय खानेकुरहरुले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने गर्छ । कतिपय खानेकुराले गर्दा हामी विभिन्न रोगहरुको शिकार हुने गर्छौं । त्यसैले बिहानै खाली पेटमा हामीले कस्ता खानेकुरा खान हुदैन भन्ने कुरा राम्ररी जान्नुपर्छ ।
मुखको क्यान्सरबाट कसरी बच्ने ?